Ị chọrọ ndụmọdụ dị mma na mpaghara ọ bụla nke mmepe gị, nke ahụ doro anya. Ma ịchọta ndị ndụmọdụ dị mma anaghị adị mfe, mgbe ị na-amalite, ị ga-aka mma na ndị ọkachamara naanị gị bụ ndị ị ga-amata na ndị maara gị nke ọma iji hụ maka azụmahịa na ọganihu gị.
Ikwesịrị ịchọta ndị ndụmọdụ na-akpọ gị mgbe ị na-agbanye ha ma nwee ohere iji dozie ajụjụ gị. Ihe ọzọ ị ga-atụle bụ ọkwa ego nke ndị ndụmọdụ gị, ọ bụrụ na ị gaa ụlọ ọrụ kachasị ike n'obodo ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ kachasị ụgwọ ma eleghị anya na-ejedebe na azụmahịa gị.
Ọ bụ ihe dị mma n'inwe nkà dị gị mkpa ma ghara ịbụ obere azụ na ọdọ mmiri ha. Ọ bụrụ na ị nwere onye ọka iwu ma ọ bụ onye na-akwụ ụgwọ ego ugbu a na-eme ka ị chee na ị na-enye ha nsogbu mgbe ọ bụla ị kpọrọ ha na ekwentị ma ọ bụ na-adọpụ ha mgbe ị na - enwe nzukọ - gbanwee ha ugbu a!
Cheta na ndị ọka iwu, ndị na-edekọ ego, ndị na-ere ahịa, na ndị ọkachamara ndị ọzọ na-agbazi ọrụ nke aka ha, ha nwere ụgwọ ịkwụ ụgwọ, ụgwọ ọrụ ndị ọrụ, ndị ahịa na-etinye ha nrụgide na nanị ọtụtụ awa n'ụbọchị ha na-ere iji mee ego!
Ị ga-enweta ihe kachasị mma n'ime ha ma ọ bụrụ na ị na-akwanyere oge ha ùgwù, kwadebere maka ọmụmụ ihe ma ọ bụ oku, ọ bụrụ na i kwuo na ị dị naanị minit iri iji gbalịsie ike ijide oge ahụ, ihe ọbụla ị na-eme biko zere iso gị na-akparịta ụka n'oge oge nlekọta ha, ọ bụrụ na ịchọrọ ikpo nkata na-akpọ ha ka ha ṅụọ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ nri ebe ha nwere ike izuike - ị ga-enwe ike ịmụta ọtụtụ ụzọ n'ụzọ a - na-akwụghị ụgwọ.
Ghọta ihe ịchọta iji chọta ndị ọrụ gị
Onye nyocha na onye bara uru
Ihe nlekọta nke ụbọchị: Zụrụ ndụmọdụ kacha mma